‘माहोल मेरो पक्षमा छ’ « Loktantrapost
‘माहोल मेरो पक्षमा छ’
१३ श्रावण २०७३, बिहीबार १५:२७
सुरुङ्गाको सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय युवा व्यक्तित्व लीलाप्रसाद चिमरिया भोलि (साउन १४ गते) हुने कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग लोकतन्त्र पोस्टले लिएको अन्तरवार्ता पढ्नुहोस्–
तपाईंको उम्मेद्वारी किन ?
–तत्कालीन झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुरुङ्गा शाखा थियो । अहिले कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको छ । करिब १२ वर्षदेखि यो सङ्घसँग जोडिएको व्यवसायी हुँ । एक कार्यकाल पदाधिकारीका रुपमा काम गरिसकेको छु । गएको निर्वाचनमा पनि म उपविजयी भएको थिएँ । त्यसकारण आमव्यवसायीको चाहना अनुसार नै मैले उम्मेद्वारी दिएको हुँ ।
जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
–म एकदमै विश्वस्त छु । मलाई के लाग्छ भने गएको चुनावमा पनि एउटा हिसाबले मलाई सम्पूर्ण व्यवसायीले माया गर्नुभएको थियो । र, फेरि पनि व्यवसायीकै हितमा काम गरेको हुनाले उहाँहरुकै चाहना अनुसार उम्मेद्वारी दिएको हो । र, यसपाली सबै व्यवसायीको मन र मत जित्नेमा विश्वस्त छु ।
कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई प्यानलमा समावेश गर्नुभएको छ ?
–मेरो प्यानलमा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लामो समयदेखि काम गरिसकेका, पदाधिकारीमा रहेका व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । जनक कार्की हालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ पनि हाम्रै टिममा हुनुहुन्छ । अहिलेको कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष डिल्लीराम पौडेल पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ । उहाँ उपाध्यक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ । र, यो नगरका सव्रिmय तथा जुझारु युवा तुलसी बिमली हाम्रो टिमबाट महासचिवको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ । अहिलेको कार्यसमिति सदस्य दण्डपाणि गौतम र पुण्य ओझा सचिव पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ । युवा व्यवसायी भरत अधिकारीलाई कोषाध्यक्ष पदमा उठाएका छौंँ । महिला सदस्यमा सुरुङ्गामा सव्रिmय कविता बस्नेत हुनुहुन्छ । हाम्रो टिम अत्यन्तै राम्रो र सबल छ । शिवशङ्कर महासेठ र रोशन श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्व हाम्रो प्यानलमा हुनुहुन्छ । सम्पूर्ण हिसाबले हाम्रो टिम समावेशी छ ।
तपार्इंको जितका आधार के के हुन् ?
म २५ बर्षदेखि सुरुङ्गामा व्यवसाय गरेर बसेको व्यक्ति हो । म जन्मिएकै सुरुङ्गामा हो । र, म व्यवसायी मात्र भइनँ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सव्रिmयताका साथ लागेँ । सुरुङ्गा जेसीजको संस्थापक अध्यक्ष हुँ । जेसीजले अहिले जुन उचाई लिएको छ, त्यसका लागि हामीले धेरै काम गरेका छौंँ । त्यस्तै लायन्स क्लव अफ सुरुङ्गाको चार्टर प्रेसिडेन्ट हुँ । कनकाई आर्यघाटको कार्यसमिति सदस्य हुँ । १० करोड रुपैयाँको अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना अन्तरगत कर्मयोग भवन निर्माण समितिको सचिव भएर काम गरेँ । यस्ता धेरै सामाजिक सङ्घसंस्थासँग काम गरिरहँदा यहाँका व्यवसायीको समस्या मैले नजिकबाट बुझेको छु । यहाँका व्यवसायीसँग म सधँै सँगै छु । र, ती समस्याको समाधान खोज्न अग्रपङ्तिमा रहेर काम गरेको छु । त्यो हिसाबमा पनि कनकाई नगरका बासिन्दाले मलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
कनकाई नगर क्षेत्रका व्यापार–व्यवसायीका समस्या चाहिँ के के रहेछन् त ?
यस नगरका व्यापार–व्यवसायीका समस्या धेरै छन् । खुद्रा पसल र तरकारी पसल व्यवस्थापन चुनौती हो । बाढीले नगरका धेरै पसल डुबानमा परेका छन् । नगरपालिकाको भवनमा पनि केही समस्या छन् । त्यो व्यवसायीहरुले नियाल्नु भएको छ । करको समस्या, लेखाको समस्या पनि छ । सम्पूर्ण व्यवसायीहरु पढे लेखेका हुनुहुन्न । जसका कारण आफ्नो लेखा प्रणाली चुस्त–दुरुस्त राख्न सक्नु भएको छैन । विभिन्न समस्याहरु व्यवसायीहरुले झेलिरहनु भएको छ ।
ती समस्या समाधान गर्न के के पहल गर्नुभयो त ?
–यी सबै कुराहरु समाधान गर्ने प्रतिवद्धता हामीले गरिसकेको छौँ । व्रmमिक रुपमा समाधान गर्दैै लैजाने छौँ । हामीले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा भनिसकेका छौँ । सबै व्यवसायीका हातहातमा प्रतिवद्धता–पत्र पुर्याइसकेका छौँ । अब हामीले गर्ने काम त्यही प्रतिवद्धता–पत्रमा छ । र, भोलि हाम्रो टिम विजयी भएर गएको खण्डमा ती प्रतिवद्धता पूरा गर्नेमा विश्वस्त रहन म आग्रह गर्दछु ।
तपाईंले जित्नु भयो भने उपविजेता टिमका साथीहरुलाई कसरी समेट्नु हुन्छ ?
–हामी अहिले २८ जना चुनावी मैदानमा छौँ । १४ जनाले जित्छन् । १४ जना उपविजेता हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई मात्र मत ल्यायो भने त्यो विजेता हो । विजेता टिमले उपविजेता टिमका साथीहरुलाई समेट्नु पर्छ । म विजय भएको खण्डमा उपविजयी टिमका साथीहरुलाई सम्मानजक स्थानमा समेट्छु । कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ आफूले सोच्ने हो । उहाँहरुकै सल्लाह र सहयोगमा आगामी कार्यव्रmम निर्धारण गर्छौं ।
एउटै पार्टीमा आस्था राख्ने दुईजना भिड्दै हुनुहुन्छ, यसले कतै गलत सन्देश त जाँदैन ?
–नेपाली काँग्रेसले मलाई आधिकारिक उम्मेद्वारको रुपमा मलाई अगाडि ल्याएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र वामपन्थीहरुको समर्थन रहेको टिमको नेतृत्व मैले गर्दै छु । अर्को टिम एमाले, राप्रपालगायतका पार्टीको गठबन्धन हो । त्यस कारण पार्टी एउटै परेन । अगल–अगल हो । मैले बुझे अनुसार एमाले र राप्रपा गठबन्धनको प्यानल एउटा रह्यो । हाम्रो अरु सबै पार्टी निकट व्यवसायीको साझा प्यानल भयो ।
अन्त्यमा आफ्ना मतदाता, शुभचिन्तक र कनकाई नगरबासीलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
–हामी कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा छौँ । म सम्पूर्ण मतदाताहरु माँझ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लीला चिमरिया र मेरो टीममा रहेका साथीहरु कोही पनि अपरिचत हुनुहुन्न । सुरुङ्गा क्षेत्रमै जन्मिएको यही हुर्किएको यहीको स्कूल पढेको
र त्यस पछाडि यही व्यवसाय गरेर बसेको व्यक्ति हुँ । म सुरुङ्गाबाट कहिले पनि टाढा छैन । र, म आम व्यवसायीहरुबाट पनि कहिले टाढा छैन । सबै व्यवसायीहरुको समस्यासँग जहिल्यै पनि सँगै हिडेको सहयात्री हुँ । तपाईंहरुले मलाई सधै आफ्नो सम्झनु भएको छ । हाम्रो टिमका साथीहरुलाई पनि आफ्नो सम्झिदिनोस् । व्यापारभन्दा बाहिर हामी कहिल्यै पनि छैनौँ । हामी तपाईंहरुलाई कुनै पनि समय, राति दिउँसो केही नभनी तपाईंहरुको हकहितमा लडिरहेका छौँ । सम्पूर्ण हिसाबले तपाईंहरुका पीरमर्का, समस्या र तपाईंहरुको खुशीमा पनि हामी सरिक हुन्छौँ । र, मेरो प्यानलको तर्फबाट यही आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो टिमको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् । हामीलाई विजयी बनाउनुस् । हिजो पनि एउटै परिवारको रुपमा हामी थियौँ र भोलि पनि हामी एउटै परिवारको रुपमा तपाईंको पक्षमा काम गर्नेछौँ । कुनै पनि समस्याबाट बाहिर जाँदैनौँ । यसपाली तपाईंहरुको मन र मत जित्छौं भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । सबै मतदाताहरुमा हाम्रो पक्षमा मतदान गरेर व्यवसायिक हकहितका लागि निरन्तर अघि बढ्न सहयोग गर्नुस् भन्न चाहन्छु । कुमारमणि पोखरेल अर्कोको प्यानलको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ अत्यन्त शालिन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँ अत्यन्त राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । अध्यक्षमा जसले जिते पनि हामी सबै विजयी हुन्छौँ । र, फेरि पनि कनकाई नगरलाई समृद्ध बनाउन हामीले एकजुट हुनैपर्छ ।
प्रस्तुति ः झुलन रेग्मी र अशोक अधिकारी
(२०७३ साउन १३ गते लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)